မတ်သာင်: June 2008
The Dangers of Chinese Power (Humour)
Boiled Baby in Herbs & Chicken
Chinese people pay too much attention to their health.
The government introduced the one-child-per-family policy.
Posted by မတ်သာင် at 11:37 PM No comments:
History of Syriam (9)
ငဇင်္ဂါဆွေသားမျိုးသားကိုလည်း၊ တဘရင်းသို့ ပို့ထားလေသည်။ ငဇင်္ဂါသမက်ပုတ္တဗညားဒလည်း၊ ဗညားနွယ်ယအမျိုး ရွှေပန်းပန်ကွန်သ္မီစုတို့ကိုလည်း သိမ်းယူတော်မူ၍၊ အိန္ဒသမန်းကို သွေးသောက်ကြီး ခန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ ရွှေပန်းပန်ဘွဲ့တော်မူသည်။ သက္ကရာဇ် ၉၉၀ ပြည့်တွင်၊ ဟံသာဝတီအနောက်ဘက်၊ တဲနန်းတော်မှာ စံတော်မူသည်တွင်၊ သားတော်မင်းရဲဒိပ္ပ လုပ်ကြံ၍၊ အနိစ္စရောက်တော်မူသည်။ ခမည်းတော်အရိပ်အရာကို မင်းရဲဒိပ္ပစိုးအုပ်၍၊ ဘထွေးတော်နှစ်ပါးကို သစ္စာတိုက်စေသည်တွင်၊ သစ္စာကို မခံ၊ ရှမ်းပြည်ယွန်းပြည်တွင် ရှိသည့်၊ ဆင်းလုံးမြင်းရင်းအမြောက်သေနတ်၊ သူရဲသူခက်၊ ရဲမက်လက်နက်ကိုင်တို့ကို အကုန်အစင်သိမ်း၍ အင်းဝသို့ ချီတော်မူသည်။ အင်းဝသို့ ရောက်လျှင်၊ မင်းရဲဒိပ္ပက ထားသည်မြို့စောင့်မြို့နေ မိုးကောင်းစော်ဘွား၊ မှိုင်းလုံးမှိုင်းသတ်၊ မင်းသားတောင်ညို၊ ၀ရသီဟ၊ အဘယဂါမဏိတို့ကို သုတ်သင်ရှင်းလင်း၍၊ သတိုးဓမ္မရာဇာ အင်းဝမှာ မင်းပြုတော်မူသည်။ အင်းဝသို့ ရောက်ကြောင်းကို မင်းရဲဒိပ္ပကြားလျှင် ရခိုင်သို့ ထွက်ပြေးမည်အကြံရှိသည်တွင်၊ ဒိုင်းသားဝင်းသားတို့ သိ၍၊ မင်းရဲဒိပ္ပကို နန်းက ချပြီးလျှင်၊ မင်းရဲနော်ရထာကို မြို့စောင့်ထား၍၊ ဒိုင်းကောင်းသွေးသောက်ကြီး ထောင်ကဲအ၀န်းတို့၊ မှိုင်းသတ်စားကို၊ အင်းဝသတိုးဓမ္မရာဇာရှိရာ လျှောက်ထားသည်တွင်၊ သက္ကရာဇ် ၉၉၄ ခု၊ ဟံသာဝတီသို့ စုံတော်မူသည်။ ရောက်လျှင် မော်ဒရီအရပ်တွင် တဲနန်းတော်ဆောက်၍၊ သီရိသုဓမ္မရာဇာ၊ မဟာဓိပတိအမည်ကို ခံတော်မူသည်။ မင်းရဲဒိပ္ပ ရဟန်းပြုပါမည်အကြောင်းနှင့်လျှောက်သည်တွင်၊ အဘကိုသတ်သည်ကို စည်ထားဘိဦး၊ နှစ်လုံးစိတ်မသာအောင်၊ မိဘကို ပြုသည်ကိုမျှ၊ ဥဿတ္တရက်ငရဲမှာ ခံရကြောင်းကို တရားတော်လာသည်။ မောင် ရဟန်းတော်ပြုသော် ဖြစ်မည်အကြောင်းမရှိ မိန့်တော်မူ၍ အကြဉ်းထားသည်တွင်၊ အနိစ္စရောက်သည်။ သံလျှင်၊ ဟံသာဝတီတွင် ရှိသည့် ဆင်လုံးမြင်းရင်း၊ ဗိုလ်မှုးတပ်မှုး၊ မြန်မာတလိုင်း၊ ရှမ်းယွန်း၊ ဒါးဝယ်၊ုကလားယိုးဒယားလင်းဇင်၊ တနင်္သာရီ၊ စေုစုလူမျိုးတို့ကို၊ ကုံစင်အောင် သိမ်းယူတော်မူ၍၊ သက္ကရာဇ် ၉၉၆ခု၊ ဟံသာဝတီက၊ အင်းဝနေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်တော်မူသည်တွင်၊ သံလျှင်မြို့မှာလည်း၊ နိုင်ငံတော်အတွင်း၊ သဘောင်္ဆိုက်ရပ် ဖြစ်၍ အစောင့်အနေသား ထားတော်မူသည်။ နေပြည်တော်သို့ ရောက်လျှင်၊ ရွှေထီးရွှေနန်းတက်သိမ်းတော်မူ၍၊ သီရိသုဓမ္မရာဇာမဟာဓိပတိအမည်တော်ကို တထပ်ခံတော်ကူပြည်သည်။ ဟံသာဝတီက သိမ်းယူခဲ့သည့် မြန်မာတလိုင်းရှမ်းယွန်းတို့ကိုလည်း၊ အသီးသီးအစို့အငန်းများမှာ ဖြည့်သွင်းဘွဲ့စုတော်မူသည်။ လုပ်မြေနေမြေ အခြေအမြစ် ပေးချသနားတော်မူသည်။ ညီတော်မင်းရဲကျော်စွာကိုလည်း၊ သက္ကရာဇ် ၉၉၇ ခု၊ ၀ါဆိုလဆန်း ၂ ရက်နေ့ အိမ်းရှေ့နှင်းတော်မူသည်။ သက္ကရာဇ် ၉၉၉ ခုတွင်၊ ညီတော်မင်းရဲကျော်စွာ လွန်သည်။ သက္ကရာဇ် ၁၀၀၁ ခုနှစ်တွင်၊ သာလွန်မင်းတရားကြီးဘုရား နတ်ပြည်စံတော်မူသည်။ ခမည်းတော်အရိပ်အရာကို သားတော်မင်းရဲနန္ဒပိတ် စိုးအုပ်တော်မူပြီးလျှင်၊ သီရိပ၀ရအိန္ဒမဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိအမည်တော်ကို ခံတော်မူသည်။ ထိုမင်းလက်ထက်တော်တွင်၊ သံလျှင်၊ ဟံသာဝတီမြို့ရွာများတွင်၊ နိုင်ငံတော်အစွန်းအနား ဖြစ်၍၊ တိုင်းရေးပြည်ရေး၊ ရာဇ၀တ်ကြောင်း၊ မြဲမြံလုံခြုံအောင်၊ မြို့စောင့်မြို့နေ၊ သက္ကရာဇ် ၁၀၀၂ ခုနှစ်၊ တောင်ခံမင်းရ်ဲသင်ရာန်ကို မြို့ဝန်ခန့်တော်မူ၍၊ ခမည်းတော်ဘုရား သိမ်းတော်မူရင်း သံလျှင်၊ ဟံသာဝတီပါသည် အရပ်ရပ်အစို့သားတို့ကို ဖြည့်အပ်သနားတော်မူသည်။ မြို့ဝန်အပါ သူရဲ ၁၁ တပ်၊ သေနတ် ၄ စို့၊ အမြောက် ၄ စို့၊ မှိုင်းလာ ၅ စို့၊ ယွန်း ၇ စို့၊ စာရေးစု၊ အကြီးစု၊ ဆားချက်စု၊ အမျိုးစုသားတို့နှင့် ထပ်လောင်းဖြည်အပ်တော်မူသည်။ ရဲလှေ ၁၂ စင်းအနက်၊ ကင်းစောင့်လှေ ၄ တို့အပါ လှေခေါင်းလှေစီး စစ်ကွပ်ကုံးပေါ် နဲနတ်သံရိုက်တက်ခပ်တို့ဖြင့် လှုသာများတို့နှင့်၊ သံလျှင်မြို့တွင် လုပ်မြေနေမြေ ရွှေဘ၀ါးတော်အောက်မှာ၊ ပေးချသနားတော်မူသည်။ သံလျှင်မြို့တွင် လုပ်မြေ ပေးချသနားတော်မူ၍၊ အစဉ်နေထိုင်ထမ်းရွက်ရသည်။ သံလျှင်မြို့ ၈ ရပ်နယ် စီရင်နက်စီရင်မြို့ရွာ ပေးအပ်တော်မူသည်။ ဒေါပုံ၊ အင်ကပူး၊ ဒလ၊ မှော်ဝန်းမြို့တို့အပါ ပေးချရင်း၊ သံလျှင်နယ် ၈ရပ် သတ်မှတ်သည်မှာ၊ သံလျှင်မြို့အရှေ့မြောက်မြစ်တောင်ဘက်ကို ရှောက်၍ လားသော်၊ ဒေးစပ်ရွာ။ အရှေ့ကို လားသော်၊ ၀င်းလေးချောင်းတဘက် ပခိုးမြေနှင့်ကျောခိုင်း၊ အရှေ့တောင်ကို လားသော်၊ အခရိမ်ချောင်းတဘက် ပကိုးမြေနှင့်ကျောခိုင်း။ တောင်ကို လားသော်၊ ပင်လယ်ထိ။ အနောက်တောင်ကို လားသော် ပင်လယ်ဝ၊ ဇရွဲအုံးကင်း။ အနောက်ကို ပင်လယ်ထွက် သဘောင်္ချောင်း၊ ဒလမြေနှင့်ကျောခိုင်း။ အနောက်မြောက်ကို ပန်အလွဲမြစ်ရေဝေး၊ မြောက်ကို ဒေါပုံနယ်မြေ။ အရှေ့ကို မစို့ချောင်းတဘက် ပကိုးမြေနှင့်ကျောခိုင်း။ မြောက် မတမလစ်ရွာ ချောင်းကောက်စင်းစင်း။ အနောက်ကို ငမိုးရိပ်ချောင်း သံလျှင်စွန်း၊ ဒဂုံမြေနှင့်ကျောခိုင်း။ သံလျှင်မြို့နယ်တွင် မှော်ဝန်းနေမြေကား။ အရှေ့မြောက်ကို လားသော် အတလိချောင်းထိ။ အရှေ့ကို လားသော် ခစင်ကော်ချောင်း။ အနောက်မြောက်ကို မှော်ဝန်းချောင်းဝ တောင်ဘက်။ မြောက်ကို မှော်ဝန်းချောင်း ကောက်ကောက်စင်းစင်း။
Posted by မတ်သာင် at 5:35 PM No comments:
History of Syriam (8)
သက္ကရာဇ် ၉၂၈ ခုတွင် ဆင်ဖြူများရှင်လက်ထက်တော်၊ ဓည၀တီရခိုင်သံတွဲမြို့ရွာများက၊ လူသွမ်းလူဆိုး၊ သူခိုးဒါးပြတို့နိုင်ငံတော်အတွင်း၊ သဘောင်္ဆိပ်၊ ပုသိမ်သံလျှင်မြို့မှစ၍၊ ၉မြို့ ဟသာင်္တကူးထွတ်မြို့ရွာများသို့ လာရောက်၍၊ အစွန်အနားဆင်းရဲသားကျွန်တော်မျိုးယောကျာ်းမိန်းမတို့ကို၊ လုယူဘမ်းဆီးနှောင့်ရှက်သောကြောင့်၊ အဆီးအဆို့အစောင့်အနေတရုပ်မော်မြို့၊ ဆင်ကောင်ကူထွတ်မြို့၊ ဟသာင်္တမြို့များက၊ လှေခေါင်းလှေစီး၊ အကြီးအကြပ်၊ လက်ခတ်ကုံးပေါ်၊ လှေစောင့်လှေထိန်းအစုံ၊ မဲလှေ ၉ စင်းဘွဲ့ဘက်၍၊ အမတ်ဒေါတေဇကို ရဲလှေမှုးငကြီးကို စာရေးခန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ ပုသိမ်မြို့ဆိပ်မိုဃ်းတိမ်ပြင်မှာ ရဲလှေ ၆စင်း၊ သံလျှင်မြို့မှာ ရဲလှေ ၃စင်း စောင့်နေရသည်။ ၎င်းတို့စားရန်ရိက္ခာ၊ စပါး၊ ဆားငါး၊ ငပိမှာ ရေကင်းမြို့၊ ၁၀ ရွာများက၊ ဆား ၅၀၀၊ ငပိ ၅၀၀ စီပေးသည်၊ ၎င်းရိက္ခာထားမန်ကိုလည်း၊ သုံးဆယ်ရွာလူ ၄၀၊ ရေကင်းမြို့က လူ ၄၀ ခန့်၍၊ ပုသိမ်မြို့မှာ ကျှတော်ဆောက်လုပ်ရသည်။ အုံးဆံ၊ ရေနံ၊ သံ၊ ပျဉ်၊ မာချီများကို ပုသိမ်မြို့ ပေးရသည်။ ရဲလှေတော်ပိုပွင်းပျက်စီးလျှင်လည်း၊ တက်ခပ်လူ ငယ်သားစောင့်သူ တစုတို့က လုပ်ပြင်ရသည်။ နောက်တကျွန်း ရခိုင်ပြည်က ကုလားငဇင်္ဂါသည် သံလျှင်မြို့လာရောက်၍ ကျွန်တော်မျိူး ခံပါမည်၊ သံလျှင်မြို့တွင် သရေတချပ်ရာမြေ သနားတော်မူပါမည်အကြောင်းနှင့်၊ နောက်လွန်မင်းတရားကြီး ပြည်မြို့မှာ စံတော်မူသည်အခိုက်၊ အသနားခံသည်တွင် သနားတော်မူ၍၊ သရေကို သေးစွာနန်းင်းပြီးမှ၊ အရှေ့ အနောက် တောင်မြောက်ကို သရေကြီး တဆန့်စီ တိုင်းထွာပြီးလျှင်၊ သက္ကရာဇ် ၉၇၆ ခုတွင် မြို့တည်၍ များမကြာ ငဇင်္ဂါပုံကံလေသည်။ တောင်ငူမြို့ကို လုပ်ကြံတော်မူပြန်သည်။ နေပြည်တော်သို့ ပြန်ရောက်လျှင်၊ ကလေးမိုးညှင်း၊ ရှမ်းပြည်မြို့ရွာမညိမ်မ၀ပ်ကြောင်းကို ကြားတော်မူ၍၊ သိမ်းရုံးလုပ်ကြံတော်မူပြန်သည်။ အလိုတော်ပြည့်၍၊ သက္ကရာဇ် ၉၈၁ ခုတွင်၊ သံလျှင်မြို့သို့ ချီတော်မူသည်။ လုပ်ကြံ၍ အလိုတော်ပြည့်လျှင်၊ ဘထွေးတော်နတ်ရှင်နောင်နှင့်၊ ကုလားငဇင်္ဂါတို့ကို ကွပ်မျက်တော်မူ၏။
Posted by မတ်သာင် at 1:20 AM No comments: